Entertainment | Eyethu News
WHO cites Zimbabwe record as outrage grows over Mugabe honour - 48 mins ago
Spain to dismiss Catalonia’s government, call elections - 49 mins ago
Trump says he’ll allow release of Kennedy assassination files - 50 mins ago
Ungaphuthelwe ubumnandi kwi-PMB Jazz Festival
Intatheli ye-Eyethu - July 3, 2015
Ikhuza ibuya nakulonyaka iPietermaritzburg Jazz Festival.
Usungule inkampani yokuqopha owaseNdwedwe
Sizwe Majola - March 3, 2015
Kuvulwe inkampani ezoqopha umculo kanye namafilimu eNdwedwe.
Ziwinele amathikithi okuyobuka i-One Direction
Intatheli ye-Eyethu - February 20, 2015
Thola ukuthi ungangenela kanjani lapha.
Akamondli uyise uDJ Cleo
Intatheli ye-Eyethu - July 21, 2014
Ukhala ngokuthi akazi ngisho indibilishi evela kuDj Cleo
Uqambe amanga kuTwitter wathi ukhulelwe ingane kaTrevor Noah
Intatheli ye-Eyethu - July 8, 2014
Intombazanyana engaziwa iqambe amanga kuTwitter yathi ikhulelwe ingane kasomahlaya uTrevor Noah.
Wale uBoity ngenxa yezithombe ezinqunu
Kuphelile phakathi kwaBoity nesoka lakhe ebese likhathele izithombe zakhe ezinqunu ezinkundleni zokuxhumana.
Kuzonandisa abaphesheya kwezilwandle kuma-MAMA
Mvelo Nxele - June 3, 2014
Kuzotheleka izihlabani zaphesheya kwezilwandle kowama-MTV Africa Music Awards ozobanjelwa eThekwini mhlaka 7 kuJuni.
Kuhlakazwe ithimba le-Alex &The Crew
Intatheli ye-Eyethu - May 28, 2014
Lihlakaziwe ithimba ebelishayela uhlelo lwasekuseni kuGagasi FM i-Alex& The Crew emuva kokumenyezelwa kwezinguquko ezintsha zalomsakazo izolo.
Iza ngamandla i-Gay’mali Dludla
Sizwe Makhanya - May 2, 2014
Yize noma ukufa kwafika kwabhidliza izinhlelo zika Lucky “Gayimali” Dludla noMalume wakhe uBhekumuzi Luthuli kodwa uthando lokucula aluphelanga kuGayimali njengoba eseze wakhipha icwecwe lakhe naye lokuqala aliqambe ngokuthi Gay’mali Dludla. UGayimali ushaya ushuni kaBhekumuzi Luthuli wona kanye lo okhalisa izinsizwa ngokuba uyi “Can’t Get, Can’t tholakala”. Ekhuluma ne-Eyethu uGayimali uthe lizophuma maduzane icwecwe lakhe elinezingoma…
Kuzokwenziwa owokukhumbula umfoka Molo
UMKHANDLU wakwaMaphumulo uhlele umcimbi wokukhumbula iqhawe lakwaMaphumulo emculweni kaMaskandi elingasekho emhlabeni uBhekumuzi “Phutha liyenzeka” Luthuli. Lomcimbi uhlelelwe ukuthi ube mhla ziyi-3 kuMeyi 2014 kanti kuzobe kunandisa nabanye abaculi abadumile abafana no Mfiliseni Magubane, Khuzani, Mtshengise Gcwensa kanye nabanye abaningi. Lomcimbi uzobanjelwa ezinkundleni zemidlalo eSabuyaze. UNgizwe Mchunu woKhozi fm owangumphathi wohlelo kubekwa lensizwa kuzobe kunguye futhi ozobe…
Bashade omhlophe u-Andile Ncube nesithandwa sakhe
Intatheli ye-Eyethu - April 30, 2014
OMUNYE angabubona njengedinda ubudlelwane buka Andile Ncube nonkosikazi wakhe omusha u-Ayanda Thabethe. U-Ayanda oyisiphalaphala sentokazi uke waba sebudlelwaneni bobulili obufanayo nelunga leBoom Shaka, uTheo Nhlengethwa. Kanti u-Andile ongumethuli wezinhlelo zemidlalo kwi-SABC, kuke kwaqubuka amahebezi okuthi uke waba nobudlelwano bothando nabantu besilisa. Lokhu kwenza abaningi bangabaze ukuthi lobudlelwano bungaphumelela. Yize kunjalo ngokwemibiko yeSunday Sun, u-Andile Ncube…